» एनटिसीको यति सस्तो अफर–१५ रुपैयाँमा १२ घण्टा कुराकानी, कसरी एक्टीभेट गर्ने ?
२४ चैत्र २०७६, सोमबार १६:११
मकवानपुर, २४ चैत । तपाई फोनमा लगातार कति समय बोल्नुहुन्छ ? ५ मिनेट, फोनमै मिटिङ गर्दा १ घण्टा ? सायद तपाई यो भन्दा बढी बोल्नुहुन्न होला । अनि तपाई धेरै फोनमा झुम्मिनुहुन्छ भने तपाईले हजारौँ रकम पनि खर्च गरिसक्नुभएको होला । तर के तपाईलाई थाहा छ ? तपाई केबल १५ रुपैयाँमा १२ घण्टा फोनमा कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ । सुन्दा अचम्म लाग्ला तर यो सही हो । यदि तपाई नेपाल टेलिकम अर्थात एनटिसीको सिम प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यो अवसर तपाई प्रयोग गर्नसक्नुहुन्छ । बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म तपाई केबल १५ रुपैयाँमा अनलिमिटेड फोन गर्न सक्नुहुन्छ । २४ घण्टाको म्याद रहने यो सेवा यदि तपाईले बाँकी रहेमा अर्को दिनमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । उदाहरणका लागि यदि तपाईले यो प्याक दिउँसो १ बजे लिनुभयो भने साँझ ५ बजेसम्ममात्र तपाई त्यो चलाउन सक्नुहुन्छ । तर तपाईले प्याक दिउँसो १ बजे लिनुभएकोले २४ घण्टा समय पुगेको हुँदैन । त्यसैले तपाईले त्यो प्याक भोलिपल्ट बिहान ५ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्मै चलाउन सक्नुहुन्छ । यो फोन तपाई एनटिसीको नेटवर्कमा गर्नसक्नुहुन्छ । कसरी किन्ने त यो प्याक आउनुहोस् यस बारेमा चर्चा गरौँ । यो प्याक प्रयोग गर्ने २ वटा तरिका छन् । पहिलो स्टार १४१५ ह्यास डायल गरेर र दोस्रो मोबाईल एप प्रयोग गरेर । हामी यी दुबै तरिकाका बारेमा पालैपालो सिक्नेछौँ । हेर्नुहोस् भिडियो–
१) पहिलो तरिका–पहिलो तरिकामा तपाई आफ्नो मोबाईलबाट स्टार १४१५ ह्यास डायल गर्नुहोस् । त्यसपछि अफरहरुको लिष्ट खुल्छ । त्यहाँ ९ नम्बरमा डे प्याक्स भन्ने अप्सन देखिन्छ । हामीले लिने प्याक डे प्याक भएकोले ९ थिचेर सेण्ड गर्नुहोस् । त्यसपछि डे प्याक भ्यालिडिटी २४ आवर्स भन्ने अप्सनको २ नम्बरमा अनलिमिटेड भ्वाईस कल एट आरएस १५ (५ एम टु ५ पिएम) भन्ने अप्सन देखिन्छ । हामीले लिने प्याक यही भएकोले २ थिचेर सेण्ड गर्नुहोस् । त्यसपछि तपाईको मोबाईलमा प्याक सुचारु भएको म्यासेज आउँछ । यसरी तपाई मोबाईलबाट यो प्याक खरिद गर्न सक्नुहुन्छ ।
२) दोस्रो तरिका–दोस्रो तरिकामा तपाई एनटिसीको मोबाईल एप प्रयोग गरेर प्याक खरिद गर्न सक्नुहुन्छ । एनटिसीको एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ । यो एपमा तपाईले सबैभन्दा सुरुमा बाई प्याक्समा जानुहास् । त्यसपछि चुज प्याकेज टाईपमा डे प्याक छान्नुहोस् । त्यसपछि चुज सब–प्याकेज टाईपमा डे प्याक भ्वाईस छान्नुहोस् र चुज डाटा प्याकेजमा अनलिमिटेड एनटी–एनटी डे भ्वाईस प्याक (५ एम टु ५ पिएम) छान्नुहोस् । र अन्तमा बाई प्याक्समा थिच्नुहोस् । यसरी तपाईले यो प्याक खरिद गर्नसक्नुहुन्छ । आदरणीय दर्शकबिन्द, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।